Kuqubule imibuzo ukufa "kwengoduso" ka-AKA - Ilanga News
Home Izindaba Kuqubule imibuzo ukufa “kwengoduso” ka-AKA
Kuqubule imibuzo ukufa “kwengoduso” ka-AKA
Kubikwa ukuthi izithanqaze phansi isuka esitezi seshumi sehhotela
KUQUBULE imibuzo ukushona kowesifazane waseThekwini, u-Anele “Nellie” Tembe (22), olotsholwe yisihlabani se-hip-hop, uKiernen “AKA” Forbes, okusolwa ukuthi uzithanqaze phansi esuka esitezi seshumi ehhotela labadla izambane likapondo, eCape Town, izolo ngeSonto ekuseni
KUQUBULE imi-buzo eminingi “ukuzibulala” kowesifazane waseThekwini olotsholwe yisihlabani se-hip-hop, uKiernen “AKA” Forbes emasontweni amba-lwa edlule, okuvela ukuthi uzitha-nqaze phansi esuka esitezi seshumi ehhotela labadla izambane likapo-ndo eCape Town izolo ngeSonto ekuseni.
Ngokwemibiko eqale yasabalala ezinkundleni zokuxhumana, yaqini-sekiswa ngabomthetho, u-Anele “Nellie” Tembe (22), uzithanqaze kuleli hhotela okuthiwa yiPepperclub.
U-Anele uzalwa ngusomabhizini-si owaziwayo eThekwini, uMnu Mos-es Tembe, okuze kwashaya isikha-thi sokuloba ucingo lwakhe lukhala lungabanjwa.
Ngokwesitatimende esikhishwe wumndeni wakwaTembe, ngokuba-mbisana nabakwaForbes, ukuqini-sekisile ukuthi impela, yindodakazi yawo le ashonile.
“Ngobuhlungu obukhulu, siwu-mndeni wakwaTembe nowakwaFor-bes, siyakuqinisekisa ukudlula
emhlabeni kwendodakazi yethu, u-Anele Tembe.
“U-Anele udlule emhlabeni ngesikhathi sasekuseni izolo ngeSonto,” kusho isitatimende. Siveza ukuthi okwamanje
umndeni kawukakwazi ukwamukela lezi zindaba ezibuhlungu kangaka.
“Sethukile kakhulu, futhi sisazama ukwamukela lokhu okwenzekile. Kulo mzuzu esikuwona wokubhekana no-buhlungu, sicela imi-ndeni yethu inikwe isi-khathi, ikwazi ukupho-lisa amanxeba,” kusho le mindeni esitatimendeni.
ngoNhlolanja (February), u-AKA, ufake isithombe sesandla sale ntokazi eyifake inda-ndatho, esho ukuthi uyicele ukuba ibe yinkosikazi yakhe, yavuma.
Ngenyanga edlule kwasabalala izithombe ezinkundleni zokuxhumana u-AKA enabantu bakubo, kwathi emuva kwezinsukwana wa-qinisekisa ukuthi bekuyolotsholwa.
Ngokusho kukaMnu Shawn Her-bst, okhulumela abosizo lokuqala beNetcare 911, uthe bazamile uku-msiza umufi, kwasho ukuthi ulimele kakhulu.
“Ubelimele kakhulu, ushonele khona endaweni yesigameko,” esho.
Okhulumela amaphoyisa aseWestern Cape, uCaptain Frederick “FC” van Wyk, uthe amaphoyisa asaphe-nya indawo yesigameko ukuthola ukuthi ukhona yini umkhondo anga-wulandela.
“Njengamanje amaphoyisa asaphenya ngalesi sigameko esenzeke ekuseni ekhoneni lomgwaqo uLoop noBloem, eCape Town. Isidumbu so-we-sifazane oneminyaka ewu-22 si-tholakale emuva koku-zithanqaza esuka phezulu ebhilidi-ni,” esho.
Previous articleKuyaqala ukufunda eDUT namuhla
Next articleGrade 9 Learners Competition